araka ny toromarika nomen’ny fanjakana. Marary nanodidina ny 20 izay mbola tsaboina eny amin’ny HJRA Ampefiloha amin’izao no notoloran’ny tahirim-pirenena fanampiana. Raha tsiahivina, niharam-boina vokatry ny fifanosehana niseho teny amin’ny vavahadin’ny lapan’ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina, ireto marary ireto, rehefa handeha hijery « podium » taorian’ny matso. Nisy tamin’ireo marary notsidihina ny zokiolona, ny tanora, ny renim-pianakaviana, ny raim-pianakaviana hatramin’ny zazakely. Nitety ireo sampam-pitsaboana maro tao amin’ny HJRA toy ny fandidiana ny loha, ny ati-kibo, ny vonjy taitra, izany hoe ireo toerana nandraisana ny marary ny delegasionin’ny CNaPS izay notarihin’ ny tale jeneraly mpisolo toerana ny CNaPS, Rtoa Tsaboto Joslina. Ny asa tagnamaro kosa no hetsika faharoa nataon’ny CNaPS ny zoma lasa teo. Tanjona ny hahazoana tanàna madio, maha te honina ary mahasalama. Ireo mpiasan’ny CNaPS teny amin’ny foiben’ny CNaPS Ampefiloha, mbamin’ireo mpiasa amin’ny biraon’ny CNaPS rehetra eto Antananarivo toa an’i 67Ha, Talatamaty, Sabotsy Namehana, Anosizato, Tanjombato no nanatanteraka izany. Ny toeram-piasana sy ny manodidina no nodiovina.